यी हुन् भीआईपी, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको कोठामा बास बस्ने: एक रातको रेट…! – Khabaarpati
December 25, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on यी हुन् भीआईपी, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको कोठामा बास बस्ने: एक रातको रेट…!
काठमाडौं। नारी च’रित्र दैव न जाने अर्थातस्त्री जातिको चरित्र भगवानालाई पनि थाहा हुँदैन। यसको शि कार नेपालका धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरु भएका छन्।यसमा पछिल्लो समय निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम चर्चामा रहेको छ। उनले आफ्नै एक महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ती गरेको आरोपमा पद मात्रै गु’माउनु परेन्, संगै भएको इ’ज्जत र प्रतिष्ठा पनि समाप्त हुन पुग्यो।
उनी अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। यस्तै एक घ’टना पाकिस्तानबाट पनि बाहिर आएको छ। अहिलेका पाकिस्तानी रेलमन्त्री शेख रशीद र टिकटक स्टार हरीम शाहले रातीको समयमा केही कुराहरु गरेको भिडियो बाहिर आएको छ।उनीहरुले खुलमखुल्ला च्याटमा कुरा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो भिडियो अहिले पाकिस्तानमा मात्रै नभई विश्वभर भा इरल भइरहेको छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
हरीमका अनुसार मन्त्री रशीदले उनीसँग पहिले ना ङ्गो भ एर अ श्ली ल भिडि यो कल पनि गरेका थिए। यो स्पष्ट छैन कि कसरी वा किन भिडियो अनलाइन ली’क भयो।भर्खरै, उनको एक भिडियो विदेश मन्त्रालय भित्रबाट आएको थियो। उनलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको कुर्सीमा बसेको देख्न सकिन्थ्यो। त्यो भिडियो एकदमै वि”वादमा पनि आएको थियो।
पछि, निजी होटलमा गि’लगि’त बाल्टिस्तानका मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएलएन) का सांसद मोहम्मद अमीनसँग उनको नृत्यको अर्को भिडियो पनि भाइरल भएको थियो।उनलाई पेशे वर ध न्दा गर्ने युव तीका रुपमा पनि ब्याख्या गर्ने गरिएको छ। हालै बाहिर आएको एक जानकारी अनुसार उनीसँगै एकजना उनकी साथि पनि छिन्।
उनीहरु समयसमयमा दुबई लगायतका देशहरुमा गएर शेखहरुलाई आ न्नद दिने काम गर्छन। उनीहरुको रे ट पनि तोकिएको थियो।जानकारी अनुसार हरीमसँग एक रात बिताउनको लागि १० हजार दि राम भनिएको थियो। यद्धपी यी कुराहरु पुष्टि भएका छैनन।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मात्र १ दिनपछि धनतेरस : गुपचुप किन्नुहोस यी ५ चीज, हुदैन कहिलै धनको कमि !